Zvatingaita Kuti Tibatsire Vanhu Vasingaiti Zvechitendero | Yekudzidza
Nharireyomurindi—Yekudzidza | July 2019
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Aja Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Macedonian Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Mbunda Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Tshwa Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande
NYAYA YEKUDZIDZA 30
Zvatingaita Kuti Tibatsire Vanhu Vasingaiti Zvechitendero
“Ndakava zvinhu zvese kuvanhu vakasiyana-siyana, kuti ndiponese vamwe nenzira dzese dzandaikwanisa.”—1 VAK. 9:22.
RWIYO 82 “Chiedza Chenyu Ngachivheneke”
1. Zvii zvakachinja mune dzimwe nzvimbo makore ano?
KWEZVIURU zvemakore, vanhu vakawanda panyika vaiva nezvitendero zvavaipinda. Asi iye zvino zvinhu zvachinja chaizvo. Vanhu vasingaiti zvechitendero vari kuwedzera. Mune dzimwe nyika, vanhu vakawanda vemo vanoti havana chitendero chavanopinda. *—Mat. 24:12.
2. Zvikonzero zvipi zvinoita kuti vanhu vakawanda vasaita zvechitendero?
2 Nei vakawanda vachiti havaiti zvechitendero? * Vamwe vanotsauswa nemafaro kana kuti nekuzvidya mwoyo. (Ruka 8:14) Vamwe havachatendi kuti Mwari ariko. Vamwe vanotenda kuti Mwari ariko asi vanofunga kuti zvechitendero zvava zvechinyakare, hazvibatsiri, hazvina musoro uye kuti hazvienderani nesainzi. Vanganzwa shamwari dzavo, vadzidzisi kana vamwewo vanhu vachiti upenyu hwakavapo nekushanduka shanduka, asi kashoma kuti vanzwe zvikonzero zvinoita kuti vatende muna Mwari. Vamwe vanosemburwa nezvinoitwa nevatungamiriri vemachechi vanokara mari nezvinzvimbo. Mune dzimwe nyika, hurumende dzinodzika mitemo inotadzisa vanhu kunamata Mwari vakasununguka.
3. Chinangwa chenyaya ino ndechei?
3 Jesu akatirayira kuti ‘tiite kuti vanhu vemarudzi ese vave vadzidzi.’ (Mat. 28:19) Tingabatsira sei vanhu vasingaiti zvechitendero kuti vade Mwari vova vadzidzi vaKristu? Tinofanira kuziva kuti zvinoitwa nemunhu patinomuparidzira zvinogona kuenderana nekuti akakurira kupi. Semuenzaniso, kuteerera kwevanhu vanobva kuEurope kunogona kusiyana nekwevanhu vanobva muAsia. Nemhaka yei? MuEurope, vakawanda vanoziva nezveBhaibheri uye vakanzwa kuti Mwari akasika zvinhu zvese. Asi muAsia, vakawanda havatombozivi Bhaibheri kana kuti vanongoziva zvishoma nezvaro, uye vangasabvuma kuti kune Musiki. Chinangwa chenyaya ino ndechekutibatsira kusvika pamwoyo yevanhu vese vatinoona muushumiri pasinei nekwavanobva kana zvavanotenda.
RAMBA UINE TARIRO
4. Nei tichifanira kuramba tiine tariro?
4 Iva Netariro. Gore rega rega, pane vanhu vasingaiti zvechitendero vanova Zvapupu zvaJehovha. Vakawanda vavo vakagara vaine tsika dzakanaka uye vaisemburwa neunyengeri hwaiitwa muzvitendero. Vamwe vaisazvibata uye vakawanda vavo vaiva netsika dzakashata dzavaifanira kusiya. Tichibatsirwa naJehovha, tinogona kuva nechokwadi chekuti tichawana vaya ‘vane nechido chekuwana upenyu husingaperi.’—Mab. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4.
Chinja mharidzo dzako paunoparidzira vanhu vasingatendi zvinotaurwa neBhaibheri (Ona ndima 5-6) *
5. Chii chinowanzoita kuti vanhu vateerere mashoko edu?
5 Iva Munhu Ane Ruremekedzo Uye Akangwarira. Kazhinji vanhu vanoteerera mashoko edu zvichibva pakuti taataura sei kwete pakuti zvii zvatataura nezvazvo. Vanofara kana tichivaremekedza, tichitaura nekungwarira, uye tichinyatsoratidza kuvafarira. Hativamanikidzi kuteerera zvatinotaura. Asi tinoedza kunzwisisa kuti nei vachiona zvechitendero semaonero avanoita. Vamwe vanhu havafariri kutaura zvechitendero nemunhu wavasingazivi. Vamwe vanoona sekuti hazvina hunhu kubvunza munhu zvaanofunga nezvaMwari. Vamwewo ndivo vanonyara kuonekwa vachiverenga Bhaibheri kunyanya vaine Chapupu. Pasinei nechikonzero chavo, tinoedza kunzwisisa maonero avo.—2 Tim. 2:24.
6. Muapostora Pauro akaratidza sei kuti aikwanisa kuchinja nzira dzekuparidza nadzo, uye tingamutevedzera sei?
6 Tingaitei kana mumwe munhu asingadi kuti tishandise mashoko akadai sekuti “Bhaibheri,” “zvakasikwa,” “Mwari,” kana kuti “chitendero”? Tinogona kutevedzera muapostora Pauro tochinja matauriro atinoita navo. Paaitaura nevaJudha, Pauro aishandisa Magwaro. Asi paaitaura nevazivi vechiGiriki paAreyopago, haana kuvaudza kuti zvaaitaura zvaibva muBhaibheri. (Mab. 17:2, 3, 22-31) Tingatevedzera sei Pauro? Kana ukasangana nemunhu asingabvumi zvinotaurwa neBhaibheri, zvakanaka kuti paunenge uchikurukura naye usamuudza kuti zvauri kutaura ndimo mauri kuzvitora. Kana ukaona kuti munhu wacho haadi kuonekwa nevamwe achiverenga Bhaibheri newe, unogona kushandisa foni kana tablet kuitira kuti vamwe vasanyatsoona zvamuri kuita.
7. Tingaitei kuti titevedzere zvakaitwa naPauro zviri pana 1 VaKorinde 9:20-23?
7 Iva Munhu Anonzwisisa Uye Teerera. Tinofanira kuedza kunzwisisa kuti nei vanhu vatinosangana navo vachifunga sezvavanoita. (Zvir. 20:5) Ngatifungei zvakare muenzaniso waPauro. Akakura nevaJudha. Asi aitofanira kuchinja paaiparidzira vanhu Vemamwe Marudzi nekuti vakanga vasina zvakawanda zvavaiziva nezvaJehovha uye nezveMagwaro. Tinogonawo kutsvakurudza kana kubvunza vanhu vagara nebasa vari muungano kuti tinzwisise mafungiro evanhu vari mundima medu.—Verenga 1 VaKorinde 9:20-23.
8. Ndeipi imwe nzira yekutanga nayo kukurukura nezveBhaibheri?
8 Chinangwa chedu ndechekuwana ‘vanhu vakakodzera.’ (Mat. 10:11) Kuti tibudirire, tinofanira kukumbira vanhu kuti vataure zvavanofunga, tonyatsoteerera. Imwe hama yekuEngland inobvunza vanhu zvavanofunga kuti ndizvo zvinodiwa kuti vafare muwanano, varere vana zvakanaka, uye varambe vachifara pasinei nekuitirwa zvakaipa. Painenge yanzwa zvavanenge vataura, inoti, “Munoona sei zano iri rakanyorwa makore anenge 2 000 akapfuura?” Isingatauri shoko rekuti “Bhaibheri,” inobva yavaratidza mavhesi anoenderana nezvavanenge vataura pafoni payo.
BATSIRA VANHU KUTI VADE MWARI
9. Tingabatsira sei vanhu vasingawanzoda kutaura nezvaMwari?
9 Tinogona kubatsira vanhu vasingawanzodi kutaura nezvaMwari nekukurukura navo nyaya inovabata-bata. Vakawanda vanoshamiswa nezvinhu zviri panyika uye zviri mudenga. Saka tinogona kutaura mashoko akaita seaya: “Zvimwe munoziva kuti zvinhu zvakawanda zvakatanga kugadzirwa nevanhu vakazvigadzira vachitevedzera zvinhu zvagara zvitoripo panyika. Vaya vanogadzira mamaikorofoni vanoongorora nzeve dzetupukanana, uye vanogadzira makamera vanoongorora maziso etupukanana. Munofungei pamunoona zvinhu zviri panyika? Munoti here zvakavapo zvega, pane akaita kuti zvivepo, kana kuti mune zvimwewo zvamunofunga?” Pashure pekuteerera, tinogona kuti: “Mainjiniya paanodzidza nezvenzeve uye maziso etupukanana, tingashaya kuti ari kuzvidzidza kunaani. Ndakanakidzwa nezvakanyorwa nemumwe mudetembi wekare kuti: ‘Iye akasika nzeve, angatadza kunzwa here? Iye akaumba ziso, angatadza kuona here? . . . Ndiye anopa vanhu ruzivo!’ Vamwe vezvesainzi vakasvikawo pakuona saizvozvo.” (Pis. 94:9, 10) Tinogona kubva tamuratidza vhidhiyo iri pajw.org® pakanzi “Kubvunzwa Nekutaura Zvakaitika” muchikamu chakanzi “Maonero Evamwe Nezvekwakabva Upenyu.” (Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO.) Tinogonawo kumupa bhurocha rinonzi Was Life Created? kana kuti rinonzi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.
10. Tingatanga sei kukurukura nemunhu asingadi kutaura nezvaMwari?
10 Vanhu vakawanda vanoda kuva neramangwana rakanaka. Asi vakawanda vanotyira kuti nyika ichaparadzwa kana kuti ichapedzisira isisagariki. Mumwe mutariri wedunhu wekuNorway akataura kuti vanhu vasingadi kutaura nezvaMwari vanowanzoda kutaura nezvezviri kuitika munyika. Kana apedza kukwazisa vanhu, anoti: “Munofungei nezvetariro yatiinayo yeramangwana riri nani? Munofunga kuti vezvematongerwo enyika, vezvesainzi kana kuti vamwewo vanhu ndivo vachaita kuti tive neramangwana rakanaka here?” Pashure pekunyatsoteerera, anoverenga kana kutaura vhesi yeBhaibheri inotaura nezveramangwana rakanaka. Vamwe vanofadzwa nevimbiso yeBhaibheri yekuti nyika icharamba iripo nekusingaperi uye kuti vanhu vakanaka vachagara pairi nekusingaperi.—Pis. 37:29; Mup. 1:4.
11. Nei tichifanira kusiyanisa mharidzo dzedu, uye tingatevedzera sei Pauro sezviri pana VaRoma 1:14-16?
11 Tinofanira kusiyanisa mharidzo dzedu patinotaura nevanhu. Nei tichifanira kudaro? Nekuti vanhu havafanani. Zvinofadza mumwe zvinogona kusafarirwa nemumwe. Vamwe vanoda kukurukura nezvaMwari kana kuti Bhaibheri, asi vamwe vanogona kufarira kana tatanga tambotaura nezvezvimwe zvinhu. Pasinei nezvavari, tinofanira kushandisa mukana wacho kuti titaure nevanhu vakasiyana-siyana. (Verenga VaRoma 1:14-16.) Tinofanirawo kuyeuka kuti Jehovha ndiye anoita kuti chokwadi chikure mumwoyo yevaya vanoda zvakarurama.—1 VaK. 3:6, 7.
KUPARIDZIRA VANHU VANOBVA KUASIA
Vaparidzi veUmambo vakawanda vane hanya nevanhu vanogara munyika dzisingabvumirwi chiKristu uye vanovaratidza uchenjeri hunobatsira huri muBhaibheri (Ona ndima 12-13)
12. Tingaitei kuti tibatsire vanhu vari munyika dziri muAsia vasina kumbobvira vafunga nezvekuti kune Musiki?
12 Pasi rese vaparidzi vakawanda vanosangana nevanhu vanobva munyika dziri muAsia, kusanganisira vamwe vanobva munyika dzine mitemo inotadzisa vanhu kunamata vakasununguka. Munyika dzakawanda dzemuAsia, vakawanda havana kumbobvira vafunga nezvekuti kune Musiki here kana kuti hakuna. Vamwe vanoda kuziva zvakawanda uye vanobvuma kudzidza Bhaibheri, asi vamwe vanotanga vachizeza kudzidza zvinhu zvitsva. Tingavabatsira sei? Vamwe vaparidzi vagara nebasa vanobudirira pavanotanga kutaura zvine ushamwari, vachiratidza kuti vane hanya nemunhu wacho, uye pazvinenge zvakakodzera vanotaura kuti upenyu hwavo hwakachinja sei pavakatanga kushandisa rimwe zano reBhaibheri.
13. Chii chinogona kuita kuti vanhu vafarire zvinotaurwa neBhaibheri? (Ona mufananidzo uri pakavha.)
13 Vanhu vakawanda vanotorwa mwoyo pavanoona kushanda kunoita zvinotaurwa neBhaibheri muupenyu. (Mup. 7:12) MuNew York, imwe hanzvadzi inoshanyira vanhu vanotaura chiMandarin inoti: “Ndinoedza kufarira vanhu vacho ndoteerera zvavanotaura. Kana ndikaona kuti vachangobva kutamira munyika macho, ndinogona kuvabvunza kuti: ‘Muri kujairana nekugara muno here? Makatowana basa here? Vanhu vemuno vari kukubatai zvakanaka here?’” Dzimwe nguva izvi zvinobatsira hanzvadzi yacho kuti itange kutaura zvinodzidziswa neBhaibheri. Pazvinenge zvichiita, hanzvadzi yacho inogona kuwedzera kuti: “Munofunga kuti chii chatinofanira kuita kuti tiwirirane nevanhu? Regai ndikuratidzei rimwe zano riri muBhaibheri. Rinoti: ‘Kutanga nharo kwakaita sekuvhurira mapopoma; ibva kupopotedzana kusati kwatanga.’ Munofunga kuti zano iri ringatibatsira here kuti tiwirirane nevamwe?” (Zvir. 17:14) Kukurukura saizvozvo kunotibatsira kuona kuti ndevapi vangada kuzoshanyirwazve.
14. Imwe hama yekuFar East inobatsira sei vanhu vanoti havatendi muna Mwari?
14 Tingabatsira sei vaya vanoti havatendi muna Mwari? Imwe hama yava nemakore akawanda ichiparidzira vanhu vasingaiti zvechitendero kuFar East inoti: “Kana munhu wekuno akati, ‘Handitendi muna Mwari,’ kakawanda kacho anenge achireva kuti haanamati vanamwari vanonamatwa nevanhu vakawanda vemunzvimbo yacho. Saka kakawanda ndinobvumirana naye kuti vanamwari vakawanda vakaita zvekugadzirwa nevanhu uye havasi vechokwadi. Ndinowanzoverenga Jeremiya 16:20 iyo inoti: ‘Munhu angazvigadzirira vanamwari here? Zvaanogadzira hazvisi vanamwari.’ Ndinobva ndabvunza kuti: ‘Tingaziva sei kuti mwari chaiye ndeupi uye kuti vakagadzirwa nevanhu ndevapi?’ Ndinonyatsoteerera, ndobva ndaverenga Isaya 41:23 iyo inoti: ‘Tiudzei zvichaitika mune ramangwana, kuti tizive kuti muri vanamwari.’ Ndinobva ndavaratidza zvimwe zvinhu zvakataurwa naJehovha nezveramangwana.”
15. Tinodzidzei pane zvinoitwa nehama iri kuEast Asia?
15 Imwe hama iri kuEast Asia inoshandisa nzira inotevera painodzokera kunoona vanhu. Inoti: “Ndinovaratidza uchenjeri huri muBhaibheri, uprofita hwakazadzika, uye ndinotaura nezvenyika, nyeredzi uye mamwe mapuraneti. Ndinobva ndavaratidza kuti sei zvese izvi zvichiratidza kuti pane Musiki ane uchenjeri. Munhu paanotanga kubvuma kuti Mwari ariko, ndinotanga kumuratidza zvinotaurwa neBhaibheri nezvaJehovha.”
16. Maererano naVaHebheru 11:6, nei vadzidzi veBhaibheri vachifanira kuva nekutenda muna Mwari uye muBhaibheri, uye tingavabatsira sei kuti vave nekutenda?
16 Patinodzidza Bhaibheri nevanhu vasingaiti zvechitendero, tinofanira kuramba tichivabatsira kuti vawedzere kuva nekutenda kuti Mwari ariko. (Verenga VaHebheru 11:6.) Uye tinofanira kuvabatsira kuti vatende zvinotaurwa neBhaibheri. Izvi zvingada kuti tirambe tichidzokorora dzimwe dzidziso. Pese patinodzidza, tinogona kukurukura uchapupu hunoratidza kuti Bhaibheri iShoko raMwari. Tinogona kukurukura nezveuprofita hweBhaibheri hwakazadzika, kutaura kwarinoita chokwadi mune zvesainzi uye zvakaitika kare, kana kubatsira kwarinoita muupenyu.
17. Rudo rwedu rungabatsira sei vanhu?
17 Tinobatsira vanhu kuti vave vadzidzi vaKristu kana tikaratidza kuti tinovada, pasinei nekuti vanoita zvechitendero here kana kuti kwete. (1 VaK. 13:1) Patinovadzidzisa, chinangwa chedu ndechekuvaratidza kuti Mwari anovada uye anoda kuti ivo vamudewo. Gore rega rega vanhu vanosvika zviuru avo vaisanyanya kufarira zvechitendero kana kuti vaisatombozvida vanobhabhatidzwa nekuti vanodzidza kuda Mwari. Saka iva netariro, uye ratidza kuti une hanya nevanhu vakasiyana-siyana uye unovada. Vateerere. Edza kuvanzwisisa. Nezvaunoita, vadzidzise kuti vave vadzidzi vaKristu.
Tingaramba sei tiine tariro muushumiri hwedu?
Tingaitei kuti tibatsire vanhu vasingaiti zvechitendero?
Nei tichifanira kuparidzira munhu wese watinenge takwanisa kutaura naye?
RWIYO 76 Unonzwa Sei Nebasa Iri?
^ ndima 5 Mazuva ano vanhu vasingaiti zvechitendero vari kuwanda. Nyaya ino inotaura kuti tingavadzidzisa sei Bhaibheri uye kuti tingavabatsira sei kuti vavimbe neBhaibheri vova nekutenda muna Jehovha Mwari.
^ ndima 1 Maererano netsvakurudzo dzakaitwa, dzimwe nyika dzacho ndedzinoti: Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, Canada, China, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Israel, Japan, Netherlands, Norway, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, neVietnam.
^ ndima 2 KUTSANANGURWA KWEMASHOKO: Munyaya ino, mashoko ekuti vasingaiti zvechitendero anoreva vanhu vasina chitendero chavanopinda kana kuti vasingatendi kuti Mwari ariko.
^ ndima 54 KUTSANANGURWA KWEMUFANANIDZO: Hama iri kuparidzira munhu wainoshanda naye pachipatara, uyo anozoongorora website yedu inonzi jw.org.
Gadzirira Iye Zvino Kuzotambudzwa
Ramba Uchinamata Jehovha Basa Redu Parinorambidzwa
“Endai Munoita . . . Vadzidzi”
NYAYA YEUPENYU Jehovha Akandikomborera Kupfuura Zvandaitarisira
Jesu Akafira Ini Pachangu Here?
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2019
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2019
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA July 2019